Gbasara Anyị - FAYGO UNION GROUP
FAYGO UNION GROUP nwere alaka ụlọ ọrụ 3
Nke mbụ bụ FAYGOBLOW nke na-emepụta ma na-eme igwe ịkụ ọkpọ maka PET, PE wdg FAYGOBLOW nwere ikikere 5 nke mepụtara, yana ụdị ikike ikikere 8. FAYGO PET igbu ịkpụzi igwe bụ otu nke kasị na kasị ike-oru oma imewe na ụwa.
Nke abụọ Factory
Factorylọ ọrụ nke abụọ bụ FAYGOPLAST, nke na-eme igwe extrusion plastik, gụnyere paịpụ extruding plastic, profaịlụ extruding line. Karịsịa FAYGOPLAST nwere ike na-enye elu na-agba ruo 40 m / min Pee, PPR anwụrụ akara.
Nke atọ Factory
Factorylọ ọrụ nke atọ bụ FAYGO RECYCLING, nke na-enyocha teknụzụ ọhụụ na karama plastik, na-emegharị ihe nkiri na pelletizing. Ugbu a FAYGO RECYCLING nwere ike ịbụ 4000kg / hr. PET na-asa ahịhịa, na 2000kg / hr plastic film saa line
Ugbu a FAYGO UNION nwetara ọtụtụ iwu site na Alibaba site na Trade Assurance. Nkwado ahia anyi kariri USD 2000,000. Yabụ na ị nweere onwe gị ịzụta site na FAYGO n'enweghị nchekasị ọ bụla.
Ugbu a FAYGO UNION GROUP nwere ihe karịrị ndị ahịa 500 sitere na mba dị iche iche, gụnyere UK, Spain, Germany, Norway, Switzerland, Italy, Turkey Russia wdg site na Europe, na America, Canada, Mexico, Brazil, Venezuela, Chilly wdg si America, na Saudi Arabia, Iran, Syria, India, Thailand, Indonesia wdg na Asia, na otutu ndi ahia si Africa.
Anyị factory emi odude ke Zhangjiagang obodo, na-ekpuchi ebe ndị 26,650 square mita. Ọ na-ewe ihe dị ka awa abụọ ịkwọ ụgbọala site na ọdụ ụgbọ elu mba SHANGHAI.
Onye isi oche anyị bụ Maazị Figo guzobere ụlọ ọrụ anyị, aha ya bụ Zhangjiagang FaygoUnion Science and Technology Co. Ltd, nke "Faygo" pụtara onye ahịa mbụ nyeere ya aka mgbe "Union" pụtara maka ndị enyi ahụ na-arụkọ ọrụ ọnụ iji mepụta ọdịnihu dị mma. N'ime afọ a, Anyị na-agbazite ụlọ ọrụ na Jinfeng, obodo zhangjiagang, wee bido ịmepụta igwe extrusion plastik maka ọkpọkọ, profaịlụ, wdg.
Na ọhụrụ injinia sonyeere anyị, anyị malitere na-emepụta plastic imegharị ihe maka iji igwe, gụnyere plastic ndinuak na saa akara, plastic granulating akara.
Maazị Figo guzobere ụlọ ọrụ ọzọ akpọrọ Suzhou Yuda Air Compressor Co. Ltd., nke na-ere ahịa kacha elu ikuku na China.
N'ihi mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ, anyị na-agbazite ụlọ ọrụ abụọ ọzọ ka anyị wee nwee ohere zuru oke maka imepụta igwe na ịchekwa ya.
Companylọ ọrụ anyị zụtara nnukwu ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nke nwere ebe 20000 square mita na anyị anaghịzi agbazite ụlọ ọrụ. Na mgbakwunye, anyị gbanwere aha ụlọ ọrụ n'ime Jiangsu FaygoUnion Machinery Co., Ltd. emi odude ke Phoenix obodo, Zhangjiagang obodo. Anyị nwere ọtụtụ na ndị ọzọ ahịa site ugbu a.
Site na mgbasawanye ụlọ ọrụ, anyị wuru ụlọ ọrụ ọhụụ na ọfịs na ala anyị. Ihe ọzọ bụ na anyị emeela mmekọrịta siri ike na ndị ahịa si n'akụkụ ụwa niile.
Anyị kwagara n'ọfịs ọhụrụ wee nweta ikikere iri na ise nke nwetara asambodo nke mba anyị.
Anyị zụtara ụlọ ọrụ ọzọ, nke dị naanị 1km site na ụlọ ọrụ nkuzi ugbu a ebe a ga-emepụta ụfọdụ igwe anyị gụnyere igwe eletriki ọkpụkpọ, profaịlụ extrusion igwe, ihe mkpofu plastik, ihe mkpofu ịkpụzi, igwe ntinye akwụkwọ, igwe ikuku, igwe ịchacha karama, nwere ike / igwe mkpuchi karama.
N'oge Novel Coronavirus ntiwapụ, anyị ụlọ ọrụ malitere na-eyi eyi gbazee-fụọ akwa igwe maka nkpuchi ákwà, ihu nkpuchi igwe nke nwetara oké ihe ịga nke ọma ma na-emepụta masks nwayọọ nwayọọ na ọtụtụ ahịa ụlọ mmepụta ihe.
Mgbọrọgwụ gbanyere mkpọrọgwụ [2006- 2012]
Mgbọrọgwụ ọgwụ [2014-]